Madaxweynaha Iiraan oo ka hadlay qaabkii ay Maraykanku ku dileen Sheekh Usama Bin ladin. – SBC
Madaxweynaha Iiraan oo ka hadlay qaabkii ay Maraykanku ku dileen Sheekh Usama Bin ladin.
Madaxweynaha Iiraan Maxamuud Axmed Najaad ayaa markii ugu horaysay dhinacooda ka hadlay qaabka ay u arkaan dilka Usama, iyo weliba siyaabaha ay Maraykanku ku dileen Sheekh Usama Bin ladin.
Sida laga soo xigtay Wakaalada Wararka Iiraan,waxaa uu madaxweynaha Iiraan Maxamuud Axmedi Najaad uu sheegay in dilka Usama ee Maraykanka uu ahaa mid ay Olole doorasho ku raadsanayaan,laakiinse aanu ahayn wax ku aadan la dagaalanka waxa ay reer galbeedku u yaqaanaa Argagixisada.
Najaad waxaa uu sheegay in dilka Usama uu ahaa mid horay u qorshaysnaa,iyadoona mudo uu gacanta ugu jiray Maraykanka,iyadoona markii dambana ay dileen.
Dowlada Iiraan horay waxaa ay shaki uga muujisay Dilka Usama,iyadoona Wasiirka difaaca dalkaasi Iiraan Axmed Waxiidi uu sheegay in ay jiri karaan mudo badan oo ku aadan qaabka ay Maraykanku u sheegteen Dilka Usama.
Waxiidi waxaa uu isweydiiyay waxa keenay in ay Maraykanku ogolaan waayaan in Khuburo madaxbanaan ay ugu oglaadaan baaritaanka maydka,iyadoona taa badalkeeda ay ku dhaqaaqeen in Bada ay ku aasaan.
Maraykanka waxaa uu ku tilmaamaa Iiraan in ay tahay Dowlada kaalisa waxa uu u yaqaan Argagixisada,iyadoona marar hore ka dhaga furaysatay in ay qaadato baaqooda ku aadan joojinta samaysashada Nuclear-ka.
Hussein Elmi says:
Nin ka tirsana jiray Hay’adda Sirdoonka Ingiriiska oo markii dambe ka fadhiistay shaqada ayaa CIA qoratay si qibradiisa ay uga faa’iideystaan Mareykanka doondoonka lagu raad joogo Usama Bin Laden. Ninkaas shaqada CIA uu ka tegay wuxuuna barnaamijka BBC ee OUTLOOK mar uu wareysi siiyay u sheegay intii uu la shaqeynayay CIA ay dhowr dheer liishaanka u soo galay Bin Laden oo ay ku dili kareen Wuxuu sheegay in mar kasataba ay amar ka sugayeen Washington si ay bartilmaameedka u qaarijiyaan.
Madaxweynaha Iran warkiisa lama baciidsan karo in waqtigan dilka Usama lagu soo beego xilliga doorashada Madaxweynaha Mareykanka.
Waxaa kaloo fursad la siinayay meel suuq loogu helo warshadaha hubka ee Warshadleyda Raasimaliyiinta Mareykanka isla markaana dhalinyarada lagu mashquuliyo laguna dhimo tiradooda iyadoo loo sheegayo waxaa u dhimaneysaan difaaca dalka hooyo.